Top 5 Fialan-tsiny noho ny Date Late
Last nohavaozina: Mey. 16 2019 | 2 min namaky
Ny ampahany ratsy indrindra momba ny tara fa ho avy ny daty endriny-tava amin'ilay olona izay efa niandry anao. Na dia mety ho sarotra, amim-pahatsorana ny tsara indrindra foana politika. Plus raha ny daty no tena fahazavan-tsaina, izy / izy dia hanome anao tanteraka ny tombontsoan'ny ny fisalasalana. Eto ambany, dia dimy fialan-tsiny azo itokisana satria tara ny daty.
Efa googled ny toeram-pivoriana in-maro, tsianjery ny lalana, minitra vitsy sisa mbola tany am-boalohany mbola misy tara. Na dia mavesatra fifamoivoizana na ianao namely rehetra jiro mena, misjudging ny fotoana marina dia hadisoana izay mora avela.
Mba tsy mampiasa Suri, I matetika Google sarintany ny toerana farany, ary maka sary ny toromarika alohan'ny avelako. Na dia araka ny tokony ho daty Mamela ny fotoana fanomanana, Araka ny tokony ho tsy mahazo aho nampitandrina rehefa tokony hiverina aho na aiza marina ny toerana farany dia izay kosa mahatonga lateness. Indray, ho upfront momba izany matetika mahatonga ho tsara nihomehy.
Tsy nahita fijanonana
Ny fiainana ao an-tanàna matetika midika hoe tsy misy fijanonana. Na dia mety tsara ny mifidy ny toerana ao anatin'ny làlana, matetika, fahafinaretana indrindra daty toerana dia tsy mety mandeha an-tongotra lavitra. Amin'ny toe-javatra ity, dia tsara indrindra ny mahita ny akaiky indrindra rehefa manao rafitra fijanonana antoka fa hanome fotoana ampy ho tena tonga amin'ny fomba ara-potoana.
Ny hoe tia biby (enga anie ny daty loatra), ny biby no zanakao. Raha hanova an-trano avy Outfits alohan'ny daty sy tafintohina manerana ny biby izay ho eo ambany toa ny toetr'andro, ianao mazava ho azy handeha hampionona azy ireo. Mampahery Na dia mety ho fotoana lavalava noho ny andrasana, ianareo sy ny biby dia hahatsapa bebe kokoa miadana, indrindra hatramin'ny alina ianao dia mety ho any aoriana kokoa noho ny mahazatra.
Work nihazakazaka tara
Avy amin'ny minitra farany ny fivoriana any amin'ny tetikasa impromptu ho very eo amin'ny asa, izany rehetra mitranga amintsika. Na dia fialan-tsiny azo itokisana asa, ho azo antoka fa tsy nivadika ho toy ny fahazarana ny daty dia ho hitanao fa ho anareo, asa dia mihoatra ny laharam-pahamehana noho ny fifandraisanareo.
Na inona na inona fialan-tsiny, dia zava-dehibe ny mampahafantatra ny daty fa ho tara. Tsy vitan'ny hoe tsara tarehy io fihetsika, fa izany dia mampiseho fa be fiahiana ianareo olona.
Ahoana no Hatramin'izao Raha Tsy An'asa
5 Fomba Tsy Mba ho Tech Mahantra
Top dimy Online Dating Safety Tips
Niaraka ny vehivavy tanora amin'ny 5 Easy Dingana